Fisoratana anarana - DELF DALF MADAGASCAR
Diplaoma ofisialy momba ny teny frantsay
Ankizy 7 – 12 taona
Zatovo 12 – 16 taona
Ho an’ny rehetra 16 taona no miakatra
Matihanina 16 taona no miakatra
Arak’ asa 18 taona no miakatra
Ny tombotsoan’ny delf
Tsapao ny fahaizanao frantsay
Raki-tsoratra sy raki-tsary
Ireo karazana laza adina
Iza ary izahay?
Alliance française 27 no toeram-panadinana eto Madagasikara. Izy ireo dia mitovy daholo ny tetiandrom-panadinana sy ny fisoratana anarana.
Misy 6 isan-taona ireo fotoam-panadinana DELF-DALF eto Madagasikara, ahitana ireo karazany rehetra mifangaro. Ny Alliance rehetra dia tsy voatery handray anjara amin’ny fotoam-panadinana rehetra. Hamarino any amin’ny Alliance ao amin’ny tanana na faritra misy anao ihany aloha raha misy ny fotoam-panadinana tianao andraisana anjara na tsia.
Ny fisoratana anarana dia azo atao mandritra ny fotoana voatokana amin’izany eny amin’ny Alliance française akaiky anao.
Hijery ny tetiandro
Ny Fisoratana anarana iray amin’ny fanadinana DELF DALF :
– dia mila ny fidiranao 1 taona maha-mpikambana ao amin’ny Alliance française (sarany miova eo anelanelan’ny 1 000 ka hatramin’ny 15 000 Ar).
– Io maha-mpikambana io dia ahafahanao mandray anjara amin’ny fanadinana hafa mandritra ny taona ka tsy mamerina mandoa intsony io saran’ny fidirana maha-mpikambana io. Ahazoana tombotsoa maro hafa koa (fakàna boky, famelabelarana, …) izay miankina amin’ny Alliances tsirairay ihany.
Sara-pisoratana anarana 2018
– Fandraiketana ara-informatika ny diplaoma nosafidiana sy ireo momba anao manokana (Anarana, fanampiny, daty sy toerana nahaterahana, firenena nahaterahana)
Izay fandraiketana izay dia ahafahan’ny mpiadina mahazo laharana manokana ho azy mandrakizay. Tena ilaina izy io mba ahafahana mijery ny valim-panadinana amin’ny tranokala. Ny mpiadina izay misoratra anarana amin’ny DALF (C1 na C2) dia tokony hisafidy sehatra iray iompanan’ny laza adina famelabelarana an-tsoratra sy am-bava:
Ny andron’ny fanadinanana
Ireo mpiadina dia tokony ho tonga ao amin’ny toeram-panadinana farafaharatsiny 20 minitra alohan’ny hanombohan’ny fanadinana miaraka amin’ny kara-panondro sy penina. Tsy misy mpiadina afaka raisina intsony ao aminin’ny efitrano-panadinana raha vao manomboka ny laza adina. Ireo mpiadina dia tsy afaka mivoaka raha tsy tapitra ny fanadinana. Ny laza adina dia manomboka amin’ny fahazoana am-bava avy eo ny fahazaona an-tsoratra ary farany ny famelabelarana an-tsoratra.
Adina am-bava isan’olona
Ny mpiadina dia antsoina tsirairay hiatrika ny adina famelabelarana am-bava. Tokony ho tonga izy miatrika ny adina miaraka amin’ny taratasy fanamarinana misy sary ary mitondra penina. Izy dia mahazo fotoana manokana ahafahany manomana alohan’ny iantrehany ny mpanadina izay anankiray na anankiroa.